လူသားရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာရှာပုံတော်မှနောက် | Apg29
၏ Sigvard ဓား
ငါ၏အမျှော်လင့်ပရောဖက်ပြုအရေးအသားဤသည်၌, ငါဖော်ပြထားတာနောက်ခံ, ယခင်ရာစုအရွယ်ဖြစ်ရပ်များတစ်ခု afterimage အဖြစ် "ဟုအဆိုပါåtervunne / ပျောက်ဆုံးသား" (လုကာ 15) အကြောင်းကိုယေရှု၏ပုံဥပမာထားတော်မူ၏။
သို့သော်သင်သည်လည်းန်းကျင်ကဖွင့်နှင့်ငါသည်လည်းယရှေုသညျပြီးတော့ထွက်ပေါ်လာမည့်ဖြစ်ရပ်များများအတွက်မော်ဒယ်အဖြစ်ကတင်ပြသည့်အခါအချိန်ကာလအပေါ်အခြေခံပြီးပုံဥပမာကိုလေ့သည်ဟုဆိုနိုငျသညျ။ ကျနော်တို့ရှိသမျှကိုသရုပ်ဖော်ပုံများမပြည့်စုံပါဆိုတာကိုသတိရရမည်ဖြစ်သည်။ သူတို့ကဘာမှရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး, သူတို့ကိုဆိုလိုယခုအချိန်တွင်ထက်ပိုပုဒ်သို့ဦးတည်သွားစေနိုင်ပါတယ်။ အခါတက်ဆင်းနှင့်ထွက် loaded သည်ဤပရောဖက်ပြုကျမ်းမှာကိုကမျြးစာ / သညျဘုရားသခငျ၏စကားတျော၏မေးခွန်းကို, ပေါ်နှင့် 66 စာအုပ်ကိုချွတ်။ ဝိညာဉ်တော်သည်အက္ခရာနှင့်ဘာသာစကားအစုံမှဘဝပေးသကဲ့သို့ထိုကွောငျ့, သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်ရဲ့လိမ်းရန်အတွက်ကျမ်းစာဖတ်, ကျမ်းစာကိုအမှီ ပြု. တစ်ဦးနားလည်မှုမှာရောက်လာရန်အလုံခြုံဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ (2 ကော 3: 6)
ငါ၏အစာသားထဲမှာငါ "förhimmelska" နှင့်လူများဧဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာက၎င်း၏ညီမျှအတွက်ကောင်းကင်တမန်တို့ဖွငျ့ဘာသာပွနျဆိုထားသောကျဆုံးခြင်းမထိ။ ဒါပေမယ့်လည်းအပြစ်, ကိုဘုရားသခင်အားပြန် "အိမ်" အဖြစ်အထူးသဖြင့်ကယ်ဆယ်ရေး၏ခွင့်လွှတ်ယရှေုအားဖွငျ့လူမြိုး၏ကယျတငျတျောမူခွငျးတင်ပြလိုပါသည်။ လုကာ 15 အဘို့အအခန်းကြီးခေါင်းစဉ်: 11 ရာစုနှစ်ကိုကျော်အမျိုးမျိုးသောမှတ်ပေးထားသည့်ဘာသာအပေါ် မူတည်. ရှေ့ဆက်ခနျးငယျ။ ပုံဥပမာကိုရည်ညွှန်းနိုင်ပါတယ်: "ဖွုနျးတီးသောသား", ဒါပေမယ့်အဖြစ်က "ဖွုနျးတီးသောသား" ။ စသည်တို့ကိုအခန်းဌာနခွဲ, 1, 2, 3, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်အတွက် 1228 သည်အထိမဟုတ်ပြီးနောက်အကြောင်းကိုသို့ရောက်လာသော - အင်္ဂလိပ်ဓမ္မပညာရှင်စတီဖင် Lang ရဲ့ auspices မှတဆင့်။ အဆိုပါသမ္မာကျမ်းစာအုပ်များကိုစာမူ, ခေါင်းစဉ်နှင့်ကျမ်းပိုဒ်ကွဲပြားခြင်းနှင့်အတူငွေပေးရသည့်အခန်းကြီးမဟုတ်။
ဒါဟာလူတို့တွင်ဝိညာဏ / ဘာသာရေးရှာပုံတော်တစ်လေးနက်တဲ့အကြောင်းရင်းသမ်မာကမျြးဖြစ်ပါတယ်။ မူလကတကယ်လူကို (1 ကမ်ဘာဦး 1-2) ဘုရားများ၏ရှာဖွေသူ, ပထမဦးဆုံးလူသားမောင်နှံကတည်းကအာဒံနဲ့ဧဝသည်ဧဒင်မြင့်မြတ်၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဥယျာဉ်၌ဘုရားသခင်နှင့်အတူအပြစ်မဲ့နှင့်သိသာဆက်ဆံရေးအတွက်မိမိတို့၏ဖန်ဆင်းရှင်နေထိုင်ခဲ့ - ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သို့၏သီးခြားနှင့်ကွဲပြားတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ဒါပေမဲ့သိသိသာသာကောငျးကငျဘုန်းအသရေနှင့်အတူ။ အာဒံနဲ့ဧဝတို့နှင့် "ကောင်းသောဒုစရိုက်၏" "အသက်သစ်ပင်", ဒါပေမယ့်သိကျွမ်းရာအပင်၏အသီးကိုအပါအဝင်ဥယျာဉ်၌ရှိသမျှသောအပင်၏အသီး, အသီးကိုစားခဲ့ဘူး, ဘုရားသခင်စားရန်သူတို့ကိုတားမြစ်ထားခဲ့သည်နိုင်နှင့်ပင်မထိခဲ့ပါဘူး။ သူတို့ကအပင်၏အသီးကိုစားကြ၏တယ်ဆိုရင်သူတို့ဝိညာဉ်ရေးရာနှင့် Corporation နှစ်ဦးစလုံးအဓိပ္ပာယ်သေမယ်လို့; "မရဏသေဆုံး" (1 ဗိုလ်ချုပ်ကြီး 2:16); "ဒုတိယသေခြင်း" (: 8 21) သေဆုံးလျက်ရှိသည်။
ဒါဟာအာဒံနဲ့ဧဝရဲ့ဘေးထွက်ထံမှဘုရားသခငျအားသို့မဟုတ်ညျဘုရားသခငျ၏ဘက်မှသူတို့ကိုလည်းကောင်း, ထို့နောက်နှင့်မည်သည့်ဦးတည်ချက်ကနေဘာသာရေး / ဝိညာဉ်ရေးရာမရှာ, သူတို့ဥယျာဉ်တော်၌အတူတကွခဲ့အတွက်မလိုအပ်သော။ သူတို့ကိုအတွက်ယုံကြည်ချက်ကသူတို့ကိုအားမိမိစောင့်ရှောက်မှုနှင့်ရငျးနှီးမှုများအတွက်ဖန်ဆင်းရှင်ယုံကြည်စိတ်ချကဲ့သို့ပင်နိုင်ငံရေးပါတီများကင်းမဲ့ခဲ့သည်။ Humanly ကောင်းတစ်မိသားစုဆက်ဆံရေးအတွက်သလောက်အလားတူလမ်းအတွက်စကားပြော။ သငျသညျပိုငျဆိုငျရှိရာအရပ်၌သင်တို့ကိုငါသိ၏။ သူအိမ်ကနေထံမှထွက်သွားမတိုင်မီ "ကိုဖွုနျးတီး / ပျောက်ဆုံးသားက" ခဲ့ပုံဖော်ပြထားတာရည်ရွယ်ချက်များအတွက်စဉ်းစား။ အဲဒီမှာအိမ်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်သူအားလုံးလုံခြုံရေးလျောက်ပတ်သောပူသောဖခင်မိတ်သဟာယဖွဲ့, ကောင်းသောအစားအစာ, ကောင်းတဲ့အဝတ်အစားတွေ, လွတ်လပ်မှုနှင့်လတ်ဆတ်သောလေထုတွေအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ သို့သော်သူ့ကိုဆွဲဆောင်ဖို့စတင်ပါပြီဟန်လာရန်စောင့်ဆိုင်းအိပ်, ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုအမွေဥစ္စာ။ သူတို့ကပင် "တားမြစ်ထားတဲ့" ပိုက်ဆံတစ်ဦးသည်ခိုင်ခံ့သွေးဆောင်မှုဖြစ်ခဲ့သည်။ သူ့အစ်ကို၏ဖြစ်ကောင်းမနာလိုသည်ညှိုး, သူကအပြင်ဘက်ကို "လောက" ကိုတွေ့ကြုံခံစားရန်, နှင့်လယ်ယာအပေါ်အိမ်မှာထက် သာ. ကြီးမြတ် "အောင်မြင်မှု" အောင်မြင်ရန်စုစုပေါင်းလွတ်လပ်ခွင့်မှဖယ်ရှားချင်တယ်။ ဖြစ်နိုင်သည်သူထိုသို့သောရည်ရွယ်ချက်မှပယ် conceited နှင့်မာနထောင်လွှား။ အဖေ "ငါ့ကိုအိမ်ခြံမြေငါ၏ဝေစုပေးရ: ငယ်သားရဲ့အခမဲ့ရပ်နေမည်ပါစေသူကို - သူ့ကိုမှစွပ်စွဲနိုင်သည့်ကျဆုံးခြင်း, သူက" ကြိုတင်မဲ "ဟုအဘ၏ပူးတွဲ" သားရဲ့အမွေကို "၏ယင်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုထွက်ဟုခေါ်သည်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ထို့နောက်သူကသူတို့ကိုအကြားမိမိ၏ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်ဝေပေးလေ၏။ သားအငယျအပေါငျးတို့သညျမိမိကိုတက်ထုပ်ပိုးပြီးနိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်ဝေးသှားကွ၏မကြာမီတွင်။ " ငါ့ကိုအိမ်ခြံမြေငါ၏ဝေစုပေးပါ။ ထို့နောက်သူကသူတို့ကိုအကြားမိမိ၏ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်ဝေပေးလေ၏။ သားအငယျအပေါငျးတို့သညျမိမိကိုတက်ထုပ်ပိုးပြီးနိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်ဝေးသှားကွ၏မကြာမီတွင်။ " ငါ့ကိုအိမ်ခြံမြေငါ၏ဝေစုပေးပါ။ ထို့နောက်သူကသူတို့ကိုအကြားမိမိ၏ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်ဝေပေးလေ၏။ သားအငယျအပေါငျးတို့သညျမိမိကိုတက်ထုပ်ပိုးပြီးနိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်ဝေးသှားကွ၏မကြာမီတွင်။ "
ဧဒင်ဥယျာဉ်ရှိကျဆုံးခြင်း (တော31) သို့ပြန်သွားသည်။ လူ့ pair တစုံစုံစမျးသှေးဆောငျရဲ့စကားအဘို့အကျဆင်းသွားသောအခါ, တားမြစ်ထားတဲ့အပင်၏အသီးကို ယူ. စားနိုင်ရန်အတွက် "ဘေးဥပဒ်ထဲကနေအကောင်းကို သိ. ဘုရားသခင်ကဲ့သို့ဖြစ်" ဘုရားသခငျဆန့်ကျင်ပထမဦးဆုံးတဦးတည်း humanly တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သောရာဇဝတ်မှုများအတွက်ဖျော်ဖြေခဲ့သည်။ ဘယ်အလှည့်၌လူကျော်လွှားကွာဟမှုသို့မဟုတ်ပိတ်ဆီးနေသောမြို့ရိုးအများ၏ပုံရိပ်သုံးစွဲဖို့, ဆိုလိုသူမ၏နှင့်ဘုရားသခင်အကြားထလေ၏။ အဆိုပါလက်မခံနိုင်အကငျြ့ခွငျးအားဖွငျ့ဆုံးရှုံးခဲ့ရသညျလူသားတို့; ယင်းဆိုးခြေလှမ်း, ဘုရားသခင်နှင့်အတူ၎င်း၏သဟဇာတဆက်ဆံရေးဟာနှစ်ဦးစလုံး - နှင့်အချိန်အတွက်လူသားတစ်ဦးဖြစ်တည်မှုအဖြစ်ယျတျောနှငျ့အတူလုပ်ပိုင်ခွင့်များသူမ၏နဲ့သူ့ရဲ့လေယာဉ်၏ဘေးထွက်သို့ရောက်ကြ၏။ တစ်ဦးက "ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျ" နဲ့ "ကွာရှင်း" - ကဖြစ်ပျက်ခဲ့သကဲ့သို့ - လူသားမျိုးနွယ်အဘို့အမမြင်နိုင်တဲ့အနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များ။
အဆိုပါဖောက်ဖျက်မှုစိတျဓာတျ, စိခန္ဓာကိုယ်နှစ်ဦးစလုံးမှအာဒံနဲ့ဧဝကိုထိခိုက်ခဲ့သည်။ အရာအားလုံးသေဆုံးသူများ, cloud ဆူညံသံများနှင့်ချူချာနေတဲ့သဘောဖြစ်ခဲ့သည်။ ဟီးဘရူးစကားလုံး Chat ကို (ဂရိအတွက်စကားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ hamartia ဖြစ်ပါတယ်), ဆှီဒငျတွင်အပြစ်တရား, ညာလူသားမျိုးနွယ်အပေါ်သို့အပြည့်အဝတပ်ဖွဲ့နှင့်အတူနှိပ်ပါ။ နှစ်ဦးစလုံးကျင့်ဝတ် (ဂရိကနေအတွေးအခေါ်များ, သီအိုရီရောင်ပြန်ဟပ်မှု။ ) (LAT ၏ကငျြ့တရားတစ်ခုလုပ်ရပ်အတွက်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ) နှင့်စိတ်ဓာတ် - (ကျင့်ဝတ်ကငျြ့ဝတျပြည်တွင်းရေးသံလိုက်အိမ်မြှောင်ဟုခေါ်တွင်စေနိုင်ပါတယ်) - မတတျနိုငျသ, က "အပျက်အစီး" မကောင်းတဲ့အလေ့အကျင့်, စှဲ, အလွဲသုံးစားမှုလက်ခံရရှိ မိမိတို့ကိုယ်ကိုအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေ။ နာကျင်မှု, ဝတ်ဆင်ခြင်းနှင့်ရန်ငြိုးအများအပြားအရိုအသေအတွက်လူသား၏တွေအများကြီးပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါစွန့်ပစ်အားလုံးဖန်ဆင်းခြင်း, burst လုပ်. ခက်ခဲခဲ့ပါတယ် "အနာဆိုး" နှင့် "အနာ" ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါလေကြောင်းသည်မုသာစကားပရိယာယ်, မကောင်းသောအပြစ်ရှိတယ်စိုးရိမ်စိတ်, လျှောက်ထားသူ, စိတ်ဖိစီးမှု, ခုခံ, အကွာအဝေး, အထီးကျန်နတ်ဆိုးနှင့်သိမ်းသွားခြင်းကိုခံရသောနှင့်အတူ vibrated ။ အောက်ခြေလိုင်း "အကျင့်ပျက်ခြစားမှုများ" ကျွန်ခံခဲ့
အချိန်ပုံဆောငျသဘောအရ - ပြုပြင်ဘို့အတွက် - ထို "နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်" တွင် "ပျောက်ဆုံး / ဖွုနျးတီးသောသား" အနုတ်လက္ခဏာအတွေ့အကြုံနှင့်ဆင်းရဲသားကိုဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ။ အသစ်ကဘဝဆက်ဆက်ပေါ်စတင်ခဲ့ - ရန်စိတ်ကူးနိုင်: တစ်စိတ်ကူး, ပျော်စရာ, အဆင်းလှခြင်းနှင့်မာနထောင်လွှားနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်သိသာကြီးနှင့်ကြာရှည်မခံခဲ့ပါ: "အဲဒီမှာသူကဖျက်သိမ်းဘဝကိုဦးဆောင်သူပိုင်ဆိုင်သမျှကိုဖွုနျးတီး။ " အောက်ပါ "အစာခေါင်းပါးသောအခါ" တွင်တစ်ဝက်ပိုင်ရှင်များ၏ဝန်ဆောင်မှုကိုယူဖို့သူ့ကိုအတင်းအဓမ္မပေးသောလူမှုရေးဖယ်, အတူ။ သူကစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်လူတို့တွင်အသက်ချမ်းသာရတယ်ဝက်ပင်နတ်ဆိုးများလှုပ်ရှားမှုသင်္ကေတနိုငျသညျ။ အဆိုပါနတ်ဆိုးသညျယရှေုကိုသူတို့ပိုင်လူကိုနှင်ထုတ်ချင်ပါတယ်သည့်အခါအနီးဝက်တစ်ဦးနွားသို့သွားလိုဘယ်လို 12-13: ငါတို့သည်မာကု5ဥပမာ, ဖတ်ပါ။ တစ်ဦးကအလိုဆန္ဒယရှေု, ဒါပေမယ့်လည်းဝိညာဉ်ဝက်ပိုင်အများကြီးကဲ့သို့အတည်ပြုခဲ့သည်။ သူတို့ဟာ၏သင်တန်းဝိညာဉ်ရေးရာသဘောအရတို့၏အညစ်အကြေးကိုဖော်ပြရန်ဝက်နှင့်ဝက်အပြုအမူပြသသောကျမ်းစာထဲမှာတော်တော်များများသောနေရာများဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါအနံ့ဝေးပုံရသည်။
လူ့ pair တစုံကို "မြွေ" အပြစ်သွေးဆောင်ရာဘို့ကျဆင်းသွားတဲ့အခါ, သူတို့သညျ လာ. အကြှနျုပျတို့အစဉ်အဆက်ခညျြနှောငျခံရပြီးနောက်လေကြောင်းလိုင်းများနှင့်ဆည်းကပ်သွေးဆောင်မှုကိုတွေ့ဆုံခဲ့သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, မာနထောင်လွှား, ငြူစူခြင်း, မြှောက်, မုသာ, အင်္ဂတေ, မုသား, ခါးသီးမှု, seductive, အသရေဖျက်မှု, hedonism, အကျင့်ယိုယွင်း, မူမမှန်, ပါဝါ, ဖိနှိပ်မှု, မကောင်းသောနှင့်မှော်အတတ်။ ဤသည်ဘုရားသခင်နှင့်ပျောက်ပရဒိသု၏ဆုံးရှုံးမှုများအတွက်ရှာဖွေရေးအတူတက်ရောစပ်ခဲ့သည်။ ဆက်ဆံရေး "ဤလောကအတွက်မျှော်လင့်ချက်မရှိဘဲနှင့်ဘုရားသခင်မပါဘဲ။ " ဖြစ်ခဲ့သည် (ဧဖက် 2:12) သမ္မာကျမ်းစာသည်အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကျဆုံးခြင်း၏လူများကဖျော်ဖြေလုပ်ရပ်များအပေါ်အများကြီးတည်ရာအရပ်တက်ပြခြင်းနှင့်စည်းကမ်းချက်များအကျိုးသက်ရောက်မှုရလဒ် halyard တစ်ဦးစဉ်းစားဆင်ခြင်စရာငွေပမာဏဝိသေသလက္ခဏာများ။ ဂလာတိ5း 19-21, ကစာရင်းပုံစံတွင်ပုံနှိပ်သည်: "ဇာတိပကတိ၏အကျင့်သိသာနေသောခေါင်းစဉ်: မတရားသောမေထုန်, ညစ်ညူး, orgies, ရုပ်တုကိုးကွယ်ခြင်း, မှော်အတတ်, ရန်လိုမုန်းတီးမှု, ခို, ငြူစူသောစိတ်, အမျက်ဒေါသ၏ကြိမ်တိုင်တိုင်, själiskhet, schisms ယူဖောက်ပြန်, ညစ်ခြင်း, မူး, ရိုင်းပါတီများနှင့်ထိုကဲ့သို့သော။ ငါပြီးသားဆိုပါတယ်အရာကိုကြိုတင်သင်ပြောပြ။ ထိုကဲ့သို့သောအမှုတို့ကိုပြုသောသူတို့သည်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်ကိုအမွေမပေးရကြလိမ့်မည် "
ရောမ 1: 29-32 ကက်တလောက်ဆော့ဖ်ဝဲ: "လူအပေါင်းတို့သည်မတရားသောအမှု, ဆိုး, လောဘနှင့်ငြိုးနှငျ့ပွညျ့စုံဖြစ်လာကြပါပြီ, သူတို့ကငြူစူ, လူသတ်မှု, စကားစစ်ထိုးပွဲ, မုသာနှင့်ငြိုးအပြည့်အဝရှိပါတယ်။ အဆိုပါအတင်းအဖျင်းများနှင့်ကဲ့ရဲ့ခြင်း, သူတို့ကဘုရားသခင်နှင့်အကြမ်းဖက်ကိုမုန်း။ အဆိုပါ declaims နှင့်ကြွား, သူတို့ကဘေးဥပဒ်များနှင့်မိဘများမှနားမထောင်, မိုကျမဲ, ဖောက်ပြန်သော, မတ်ေတာမဲ့နဲ့အကြင်နာမဲ့အတွက်အကြံပိုင်ဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ကဒီလမ်းအတွက်ပြုမူသောသူတို့အားအသေခံထိုက်တော်မူသောဘုရားသခင်ကိုရဲ့ဖြောင့်မတ်အမိနျ့တျော၏ကောင်းစွာသတိပြုမိကြသည်။ သို့သျောလညျးသူတို့အဲဒီလို, သူတို့သည်လည်းအခြားသူများကိုလုပ်ကြောင်းသဘောတူ "ဒါကြောင့်ဆိုးဆိုးရွားရွားနှင့်လမျးစမကောင်းတဲ့ကဖြစ်, ဒါကြောင့်မကောင်းတဲ့သူကဧဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာကျေးဇူးတော်ထံမှအာဒံနဲ့ဧဝရဲ့ကျဆုံးခြင်းအပေါ်အခြေခံပြီးဖြစ်ပါတယ် - ။ သူတို့ကမြွေကိုအားဖြင့်ခဲ့ကြသည်အဖြစ်ကိုချိုးဖျက်ဖို့စုံစမ်းကြ၏။ ဘယ်လောက်ဝေးဘာသာရပ်သို့ငါဆဲသမ္မာကျမ်းစာခရစ်ယာန်ယုံကြည်ခြင်းငှါ, extension ကိုလုပ်ချင်, ယုံကြည်သူများ၏လူ့ချို့ယွင်းချက်များအတွက်အခန်းတစ်ခန်း, သောငါတို့ယဇ်ပုရောဟိတ်, ယရှေုသညျသဘောရှိ၏
ပရဒိသုအာဒံနဲ့ဧဝကိုလှည့်စားသောမြွေကိုမညျသူနညျး - ကောင်းပြီ, ဒါဆိုကျွန်တော်ပြန်လာမည့်ကောင်းကင်အရပ်၌အချို့သောလာကြတယ်ရာအရပျကို ယူ. "နာရီအချိန်" သောဖြစ်ရပ်များကိုသွားပါ။ ဟေရှာယ 14 နှင့်ယေဇကျေလ 28 ခုနှစ်မှာမှာ-pervading တ လုပ်. တောက်ပကောင်းကင်တမန်သည်အပြစ်ဖြေရာသို့ကျရောက်နှင့်ဘုရားသခင်တဘက်၌ထ။ ဒါဟာအခြားအရာတို့ကဆိုသည် မိမိအပတ်သာနှင့်ပုလွေ "ရွှေနှင့်" တန်ဆာဆင်ကြသည်ကိုဖတ်ရှုဖို့။ ဒါပေမယ့်သူကကောင်းကင်၏အကြီးအကဲ "ကာကွယ်" အဖြစ်ကသူ့အနေအထားကိုကျေနပ်သည်မဟုတ်, အာဏာကိုတက်တဲ့ megalomaniac ပိုမိုမြင့်မားချင် - သူက "တောင်ကြီးတောင်ငယ်gudaförsamlingens" ပေါ်တွင်ဘုရင်အဖြစ်ထိုင်အထိပါပဲ။ အဘယ်အရာကိုကျေးဇူးတော်ကနေကျဆုံးကောင်းကင်ကမျြးစာတှငျဖွစျနိုငျကျွန်တော်တို့ကိုအဘယ်သူမျှမဖြေကိုပေးသည်။ ယေရှု၏ကုသမှုအားဖြင့်ပွနျလညျထူထောငျရနျလိုအပျကွောငျးကို '' သွန်းလောင်း-na ယဇ်ပူဇော်သောအသွေးကို - သူကထင်ရစေခြင်းငှါအဖြစ်ဘယ်လိုထူးဆန်းတဲ့နှင့်လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ် - ဒါပေမယ့်သန့်ရှင်းသောကောငျးကငျနယ်ပယ်တစ်ခုအညစ်အကြေးခဲ့သည်
ကောငျးကငျတဤလောကသည်ထိုသူနှင့်ဘုရားသခင်အကြားရွေးချယ်ဖို့တစ်ဦးအနေအထားဖြစ်ခြင်းသို့ရေးဆွဲခဲ့သည်။ ပြီးတော့သူကကောင်းကင်ဘုံ၏အိမ်ရှင်၏တတိယညျဘုရားသခငျ၏ရန်သူ (:4ဗြာ 12) ရက်နေ့တွင်ရပ်တည်ရန်ရှေးခယျြခဲ့ပုံရသည်။ ဘုရားသခငျသညျဆန့်ကျင် egofulle ခေရုဗိမ်ရာဇဝတ်မှုမီ, ယုံကြည်ခြင်း၌ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုယူရန်မယှဉ်ပြိုင်မှုသို့မဟုတ်နှစ်ဦးကိုထမ်းဘိုးအဲဒီမှာရှိခဲ့သညျ။ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်တစ်ဦးဖြစ်ရပ်ဆန်းအဖြစ်မတည်ရှိခဲ့ပါဘူး။ ခမည်းတော်, သားတော်နှင့်ကောင်းကင်တမန်များကသူတို့ကိုအကြားတစ်ဦးချင်းစီကတခြားမှာအထူးတာဝနျကိုမပါဘဲသန့်ရှင်းခြင်းနှင့်ဘုန်းအသရေအတွက်အတူတကွခဲ့ကြသည်။ ဘုရားသခင့ နေ. အတွက်သို့မဟုတ်ဆန့်ကျင်ဘယ်အရာမရှိ။ အဘယ်သူမျှမ, ကောင်းကင်ဝိညာဉ်ရေးသို့မဟုတ်ဘာသာရေးအဖွစျဖျောပွနိုငျသောအရာကိုမှမဆိုချိတ်ဆက်မှုကိုမပါဘဲသွား၏။ အဘို့, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးသို့မဟုတ်အခြားပြီးနောက်အဘယ်သူမျှမလျှောက်ထားသည့်ရက်စွဲမှတက်ဖြစ်ခဲ့သည်။
သို့သော်လူစီဖာ၏မာနထောင်လွှားရာဇဝတ်မှုကြာပါသည်။ အရှင်အပြစ်တရားပညတ် - ထို့ကြောင့်ဧဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာကျဆုံးခြင်း၏မော်ဒယ်အာဒံနဲ့ဧဝကိုစုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကိုခံသောသူ "ဖန်တီး" ။ အဆိုပါစွန့်ပစ်ဘို့မိမိတို့စိတ်ထဲမှာအာဒံနဲ့ဧဝတို့နှင့်အတူထွက်ရပ်အရာများနှင့်လူသားမျိုးနွယ်နောက်မှအပြစ်တရား၏ကွဲပြားခြားနားသောလက္ခဏာများဖြစ်ရောက်လာသော - ထိုကောငျးကငျတမင်းသားလူစီဖာအပေါငျးတို့သအပိုင်းပိုင်း၏ပထမဦးဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်။ ဥယျာဉ်တော်၌အရှင်မှန်ပုံရိပ်ကဲ့သို့ရှေ့တျော၌ဖြစ်ပျက်သောအရာတစ်ခုခုတစ်ဦးမိတ္တူဖြစ်ခဲ့သည်။ ယောဟနျသ 10:10 ညျဘုရားသခငျ၏ရန်သူအတွက်အောက်ပါအတိုင်းထို့အပွငျ, ယရှေုထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။ "အဆိုပါသူခိုးသည်ခိုးခြင်း, သတ်ခြင်း, ဖျက်ဆီးခြင်းငှါကြွလာ" ဒီနေ့ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချ, လိင်အပြောင်းအလဲများနှင့် euthanasia ကြိုးပမ်းမှုအတွက်, လူ့အခွင့်အရေးလုပ်ရပ်များဆေးဘက်ဆိုင်ရာသိပ္ပံနှင့်လူ့နာမ၌ဖန်ဆင်းတော်မူသောကြီးဖြစ်ပါတယ် အဲဒါကို "အီဗိုလူးရှင်း" ၏တာဝန်ပေးနာမည်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်နိုင်အောင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်သြဇာလွှမ်းမိုးရန်။ ဧည့်ခန်းအပြင်းထန်ဆုံးအနိုင်ပေး / အဆိုပါ။
ဤရွေ့ကား, ဖြစ်ကောင်းသညျယရှေု Fien-On အကြောင်းကိုယောဟန် 8:44 ပြောဆိုရာနှငျ့အတွက်ချည်ထားပါလိမ့်မည်: "အဘယ်သူမျှမထိုသူ၌သစ္စာရှိဘို့သူသည်ရှေးဦးစွာ မှစ. လူအသက်ကိုသတ်ခဲ့အမှန်တရား si-da အပေါ်မှာရပ်ဘယ်တော့မှသိရသည်။ သူကတစ်ဦးမုသားပြောတတ်သည့်အခါသူတစ်ဦးမုသာကိုသုံးသောမုသာ၏အဘသည်မိမိကိုမိမိအပြင်ဘက်ပြောသော "1 ယော3ခုနှစ်တွင်: 8 ဖတ်:" ။ အဆိုပါမာရ်နတ်ရှေ့ဦးစွာ မှစ. ပွစျမှားသောထားပြီး "။ စာဖတ်သူကိုကောင်းကင်လောကရှိလူအပေါင်းတို့သည်ကောငျးကငျတသတ္တဝါတို့တွင်တောက်ပခေရုဗိမ်, တှေးအချေါနှငျ့ကငျြ့အတွက်အပြစ်ဖြေရာနှင့်ပြည့်စုံနိုင် "အလင်းဆောင်လုလင်က" ဖြစ်ဆီသို့ရောက် လာ. , ဘယ်လိုထွက်ရှာတွေ့ဖို့ကမျြးစာကွဲပြားခြားနားသောစာသားများကို အသုံးပြု. မဖြစ်သင့်ဥပမာ - ထိုကဲ့သို့သောလူသတ်မှုမုသာအဖြစ်။ သင်ဤစဉ်းစားခြင်းနှင့်အကြောင်းစကားများနှင့်စာအရေးအသားအတွက်ဆွေးနွေးပွဲများကျင်းပရန်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ဒါလှသောကြောင့်ဘာသာရပ်အပေါ်ကျမ်းစာရဲ့တိတ်ဆိတ်နှင့်အတူဆန့်ကျင်မှဦးဆောင်သည်ဟုသုံးသပ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်မဟုတ်ပါဘူး။
မြွေရဲ့ဘေးထွက်၏အကြောင်းတရားများအခြေခံသူဟာအပြစ်တရားမှအာဒံနဲ့ဧဝကိုစုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကိုခံ - နှစ်ဦးစလုံးသည်သူ၏လူစီဖာအဘို့လက်စားချေပြီပုဂ်ဂိုလျအနနေဲ့ကသူ့အားကြီးသောသူတို့သည်ဘုန်းတော်ကိုဆုံးရှုံးလျှင်, သူပြင်သို့ပစ် လိုက်. ချကောင်းကင်ဘုံမှဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ပုနျကနျခဲ့ကွောငျးအမျက်ဒေါသခဲ့သည်။ ဘယ်သူကပုံ "မြွေ" ဖွအသွင်ပြောင်း / ကျိန်စာခံယူကြောင်းဆိုလိုသညျ။ ဒါပေမယ့်လည်းကျမ်းစာအများအပြားမြိန်အမည်နှင့်အယူအဆ၌ဤစဉ်းစားအဖြစ်သူ့ကိုတင်ဆက်: နဂါးစာတန်မာရ်နတ်, Beelzebub, လဝိသန်, ရန်သူ, ရန်ဘက်ပြုသောသူ, ပြိုင်ဘက်သည်တောခွေးနှင့်လူစိမ်း။ နယူးအမည်များကိုသမိုင်းတလျှောက်လုံးအမျိုးမျိုးမှော်အတတ်-ဘာသာရေးလူ့အဖွဲ့အစည်းများနှင့်ဒဏ္ဍာရီထဲမှာစတင်သုံးစွဲခဲ့ကြသည်။ ဥပမာ: မာဒှတျ, ဇု, Samhain, Ahriman, အဆိုပါဝက်, အရှက်ကွဲခြင်းကိုမာရ်နတ်နှင့်မာရ်နတ်။
ပေးထားသောမြွေဘုရားသခငျသညျ, ဖန်ဆင်းသမျှမုန်း၏။ သဘာဝကျကျကောငျးကငျတမင်းသားမိုက်ကယ်။ မိုက်ကယ်ကောင်းကင်ကနေသူ့ကို ejecting ဦးဆောင်: "ကောင်းကင်၌စစ်တိုက်ရှိခဲ့သည်: မိက္ခေလနှင့်သူ၏ကောင်းကင်တမန်တို့သည်နဂါးကိုစစ်တိုက်။ ထိုအခါတိုက်သော်လည်းနဂါးနှင့်သူ၏တမန်, ဒါပေမယ့်သူကအလုံအလောက်ခိုင်မာတဲ့မဟုတ်ခဲ့, မိုဃ်းကောင်းကင်၌သူတို့အဘို့အဆိုအရပျကို "(ဗျာဒိတ် 12: 7-8) မရှိတော့ရှိ၏။ မြွေသင်တန်း၏ဥယျာဉ်တော်နဲ့လူ့စုံတွဲ, မုန်း၏။ သို့သော်အများဆုံးအထူးသဖြင့်သူသည်သားတော်၏ငြူစူသောစိတ်တို့ကမောင်းနှင်ခဲ့ပါတယ်, သူ့ကိုသူ၏ hatiske ရန်သူနှင့်ရန်ဘက်ပြုသောသူကိုဖန်ဆင်းခဲ့သည်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သူ, နောက်ဆုံးမှာပိုပြီး tvekamper ပိုမိုရှုံးနိမ့်သညျဘုရားသခငျ၏သားတျောနှင့်အတူသစ်ကိုအစည်းအဝေးများရှိလိမ့်မည်ကြောင်းပြီးသားကိုဒီမှာအာရုံခံ။ ကျနော်တို့အပါအဝင်အမှန်အတိုင်းလက်ခံခံစားအတူထိုင်နေကြတယ် သူသညျတော၌သညျယရှေုကိုစုံစမျးဖို့ကိုယ်တော်တိုင်ပေးသောအခါသည်သူ၏အရှုံးရန်။ ဗျာဒိတ်ကျမ်း 13: 8 ယရှေု (ဥပမာHedegårdsဘာသာပြန်ချက်) ကိုပေးသည်: "ကမ္ဘာ၏အခြေခံအုတ်မြစ်ကနေသိုးသငယ်သည်အသေကောင်တို့၌" ။ ဤတွင်ကျနော်တို့ဗျာဒိတ်ကျမ်းအချို့တူညီအရေးအသားရှိသည်, ဒါပေမယ့်အကြားရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာအမြင်များနှင့်အတူ: တဖကျတှငျအရှင်: အဆိုပါမာရ်နတ် "ဟုရှေ့ဦးစွာ မှစ. " ဟုရှေ့ဦးစွာ မှစ. "ဟုလူသတ်" အပြစ်ရှိသောသူဖြစ်ခဲ့သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်ဘုရားသခငျ့သား "ဤလောက၏အခြေခံအုတ်မြစ်ကနေ" အသေခံရသောအခါ။
"ရှေ့ဦးစွာ မှစ. " စည်းကမ်းချက်များ "အစအဦး" ကိုလျှောက်ထားသောမည်သည့်ရှုထောင်သို့မဟုတ်ကာလ၌ကျော်စဉ်းစားသုံးသပ်ရသောအခါတစျဖနျကြှနျုပျတို့သညျ "ကမ္ဘာ၏အခြေခံအုတ်မြစ်ကနေ" ဤကျမ်း၏အနက်ကိုအတူလွယ်ကူသောယူပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ကအရှင်မွကွေီးပျေါမှာဘုရားသခင်၏ဖန်ဆင်းခြင်းသေးဖူး, ဒါမှမဟုတ်မြေကြီးတပြင်မှာအခြေအနေနှင့်ပရဒိသု၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖန်တီးမှုနှင့်အတူလုပ်ဖို့ရှိပါတယ်မရှိသေးပေသည့်အခါအချိန်နှင့်ပတ်သက်ပြီးနိုင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့၏တော်တော်လေးနြိုငျပွညျ့စုံစမမြင်ရတဲ့ထို့နောက်အနာဂတ္တိသော "အသေသတ်ခြင်း" အမှုဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့သိသိသာသာမပြည့်စုံကရာနီ၏လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်သော။ 1 ဗိုလ်ချုပ်ကြီး 3:15 ဘုရားသခင်ဟာလာမည့်တကယ်တော့ facing မြွေသတ်မှတ်အတွက်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်: "။ သူက (ငါ့သားအ) သည်သင်၏ခေါင်းကိုနှိပ်စက်တော်မူမည်, သင်သည်သူ၏ဖနောင့်ဒဏ်ခတ်လိမ့်မယ်" ဗြာဒိတျ 12:12 ခုနှစ်တွင်ပြုလုပ်ဖတ်: "ထို့ကြောင့်အိုကောင်းကင်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြလော့နှင့် သူတို့ကိုတှငျနထေိုငျသူမြားသငျသညျ! သူသည်မိမိအချိန်တိုတောင်းကြောင်းကိုသိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သို့သော်မာရ်နတ်သည်ကိုမြေကြီးနှင့်ပင်လယ်သည်မင်္ဂလာရှိ၏, ဒေါသအမျက်ကြီးသောရှိခြင်း, သင်တို့ဆီသို့ဆင်းလာနေသည်။ "မာတင်လူသာသီဆိုခဲ့များနှင့်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်က၎င်း၏စစ်မှန်သောစိတ်ကူးယဉ်ဓမ္မသီချင်းများအတွက် 1529 ခုနှစ်တွင်ကစား" A တန်ခိုးကြီးသောခံတပ်ငါတို့၏ဘုရားသခင်ရှိ၏ "(ဆှီဒငျ hymnal အတွက်အမှတ် 237):" အမှောင်မင်းသားခြိမ်းခြောက်ခြင်းနှင့်အမျက်တော် ထွက်. ဆငျးသသူအကြမ်းဖက်မှုနှင့် argan နှင့်အတူförvisstပြင်ဆင်နေသည် drop ... "ကကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူလဲအကြီးအကောငျးကငျတမနျအားဖြင့်ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲဖို့နီးပါးမိမိသန့်ရှင်းတာဝနျကိုဘုရားသခငျ၏သားများကဲ့သို့ပုံရသည်နှင့်လူသားထု၏အနာဂတျအတှကျအပြစ်တရား၏အကျိုးဆက်များ, ထွက်ခွာသွား၏ပါတီအားအတွက်အတိုင်းလိုက်နာမညျ့သူ - ပြီးသားမျက်မြင်မရတဲ့နည်းနဲ့နှင့်ပရောဖက်ပြုကိုယ်တော်တိုင်ခွင့်ပြုခဲ့ "အသတ်ခံရ"; သားတော်သိုးသငယ်သည်ကောင်းကင်၌လူစီဖာရဲ့စစ်တိုက်ဆုံးရှုံးမှုမှာပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ သူကဒါဟာနီးပါးထွက်ခွာသွား၏ပါတီအားအတွက်အတိုင်းလိုက်နာမယ်လို့သူကိုကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူလဲအကြီးအကောငျးကငျတမနျအားဖြင့်ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲအားမိမိသည်သန့်ရှင်းသောတာဝနျသညျဘုရားသခငျ၏သားများနှင့်လူသားထု၏အနာဂတျအတှကျအပြစ်တရား၏အကျိုးဆက်များနှင့်တူပုံရသည် " ... အကြမ်းဖက်မှုနှင့် argan ချွတ်နှင့်အတူförvisstပြင်ဆင်နေသည် - ပြီးသား "သတ်" ကိုယ်တော်တိုင်မမြင်ရတဲ့နှင့်ပရောဖက်ပြုလုပ်သော; သားတော်သိုးသငယ်သည်ကောင်းကင်၌လူစီဖာရဲ့စစ်တိုက်ဆုံးရှုံးမှုမှာပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ သူကဒါဟာနီးပါးထွက်ခွာသွား၏ပါတီအားအတွက်အတိုင်းလိုက်နာမယ်လို့သူကိုကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူလဲအကြီးအကောငျးကငျတမနျအားဖြင့်ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲအားမိမိသည်သန့်ရှင်းသောတာဝနျသညျဘုရားသခငျ၏သားများနှင့်လူသားထု၏အနာဂတျအတှကျအပြစ်တရား၏အကျိုးဆက်များနှင့်တူပုံရသည် " ... အကြမ်းဖက်မှုနှင့် argan ချွတ်နှင့်အတူförvisstပြင်ဆင်နေသည် - ပြီးသား "သတ်" ကိုယ်တော်တိုင်မမြင်ရတဲ့နှင့်ပရောဖက်ပြုလုပ်သော; သားတော်သိုးသငယ်သည်ကောင်းကင်၌လူစီဖာရဲ့စစ်တိုက်ဆုံးရှုံးမှုမှာပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။
လူစီဖာလျှက်နှင့် "ကောငျးကငျ" Ormväsendetလေးချေးငွေနှင့် nedkastanden သို့မဟုတ်bortgåendenအဖြစ်ကိုရှေးခယျြတာဖြစ်ပါတယ် - အသီးအသီး "ခြေလှမ်း" ကိုတိုးချဲ့ရှုံးနိမ့်နှင့်အတူ:
1. ပြိုလဲကောင်းကင်တမန်က "လူစီဖာ" အဖြစ်မိုဃ်းကောင်းကင်ထဲက Get: "ထိုအခါအကြီးနဂါးသောရှေးမြွေဟောင်း, မာရျနတျနှငျ့စာတနျကိုချေါပွီးသောလောကဓာတ်လုံးကိုအဆုံးထိ, မြေကြီးသို့ချပစ်ခဲ့နှင့်သူ၏တမန်သူနှင့်အတူဆင်းချပစ်ကြ၏။ " ( 12: 9)
မွကွေီးပရဒိသုထဲကမြွေအမျှ 2. (ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သို့၏မြင်နိုင်စိတျအပိုငျး, ဒါပေမယ့်ကောင်းကင်ဘုံရှင်ဘုန်းအသရေနှင့်အတူ) - ဖြစ်ကောင်းအာဒံနဲ့ဧဝတို့ကနေဖယ်ထုတ်ထားခဲ့သည်နေစဉ်။ အစိုးရရှေ့နေ / စာတန်၏အနေအထားကနေဘုရားသခင့ 3. (ထိုကောငျးကငျဒေသများတွင်တစ်နေရာ) ဘုရားသခငျ၏လူယောဘသည် (2: 7): "ထိုအခါအစိုးရရှေ့နေ / စာတနျကထာဝရဘုရားကိုစွန့်သွား လာ. , သူ၏သရဖူကိုဆီသို့ခြေဘဝါးမှသည်ဦးအနာဆိုးအနာယောဘဒဏ်ခတ်တော်မူ၏။ " "ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီအစ်ကိုများကိုဘက်ကြှနျုပျတို့၏ဘုရားသခငျရှေ့တော်၌စွပ်စွဲခံရသူရသောနေ့နှင့်ညဉ့, နှိမ့်ချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ " ထို့ကြောင့် "ရှိမုန်ရှိမုနျကို: ဒီစွပ်စွဲချက်ကို Up ကို၏ 12:10 အမြားအပဲ! စာတနျကို (trans ဆိုတဲ့အခြားတစ်ခုခုကိုရရှိခဲ့သည်။ ) မေးလျှင်ဂျုံသကဲ့သို့သင်တို့ရှင်းရှင်းဖျက်ဆီးခြင်းငှါစေရန် "(လုကာ 22:31)" သင်၏ရန်သူတည်းဟူသောမာရ်နတ်သူသည်ကိုက် စား. နိုငျသောစှာရှာဟောက်သောခြင်္သေ့ကဲ့သို့သွားလာ "(1 ပေ5း 8) ။ ။ "စာတန်သူ့ကိုယ်သူအလငျး၏ကောငျးကငျတမနျသို့အသွင်ပြောင်းနေသည်။ " (2 ကောရိန္သု 11:14) 4. ငရဲ (ဗြာဒိတျ 20:10)
တစ်ဦးချင်းစီအဆင့်တစ်ခုကြီးထွားလာအောင်ပွဲနှင့်ဘုန်းအသရေနှင့်တကွ, သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအားဖြင့်စုစုပေါင်းဆန့်ကျင်ဘက်, ယရှေုသလည်းလေးအဆင့်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်ကြောင်းမှတ်ချက်:
သင်္ချိုင်းတွင်းကို (hades) မှ Up ကို 1. သူဝိညာဉ်တော်၌အဘယ်အရပ် (1 ပေတရု 3:19) ကရာနီမှာမိမိအောင်ပွဲတရားကိုဟောပြောခဲ့ကြပြီးနောက်။ 2. သေခြင်းမှနှင့်သင်္ချိုင်းထဲကကြီးပြင်း: "။ ထိုကြောင့်ငါ၏ရွှင်လန်းသည်နှင့်ငါ့လျှာဟုတ်ကဲ့, ဝမ်းမြောက်ခြင်းပင်ငါ၏ကိုယ်သင်ျခြိုငျးတှငျး၌ငါ့ကိုထားခဲ့ပါသို့မဟုတ်အကျင့်ပျက်ခြစားမှုကိုတွေ့မြင်ရန်သင့်သန့်ရှင်းသောဘုရားမသွားပါစေလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ချက်အတွက်ငြိမ်ဝပ်စွာနေပါလိမ့်မယ်" (တမန်တော် 2:27) ။ မည်သူမဆိုသူ့ကိုမှရရှိခဲ့သောဘုန်းတော်ထင်ရှားများအတွက်ခမည်းတော်ထံသို့ Up ကို3မီ, "ယေရှု (မာရိသညျဂဒလမာ) သူမ၏ရန် said: 'ငါသေးခမည်းတော်ထံသို့တက်ပြီကြပြီမဟုတ်များအတွက်အလုပ်သမား, ငါ့ကိုမထိ။ ဒါပေမယ့်ငါ့ညီအစ်ကိုတို့သွားပြီးသူတို့ကိုပြောပြ, ငါသည်အကြှနျုပျ၏ဘုရားသခငျနှငျ့သငျ့ Gud, ငါ့ခမညျးတျောနှငျ့သငျ့ခမည်းတော်ထံသို့တက်။ ' ") ။ (ယောဟန် 20:17), အစောပိုင်းညဦးယံ၌ထိုနေ့တွင်ပင်ယုဒလူတို့ (20:19) ၏ကွောကျရှံ့ခွငျးအဘို့အသူတို့ကိုယ်သူတို့သော့ခတ်တပည့်များအတွက်ကိုချီးမြှင့်သညျယရှေုကိုပြသထားတယ်။ အဲဒီမှာသူကသူတို့sårmärktaလက်ခြေတို့နှင့်သူ၏ဖောဘက်နှစ်ဦးစလုံးပြသထားတယ်။ ဤတွင်သူတို့ကသူ့ကိုမထိသင့်ကြောင်းအဘယ်သူမျှမမေးခှနျးကရှိခဲ့သည်။ ရှစ်ရက်အကြာတွင်, ယရှေုသညျမိမိလက်၌နှင့်သူ၏ဘက် (20:27) တွင်လက်ညှိုးထားရန်တပည့်သောမတ်စ်ဖိတ်ခေါ်ခဲ့သည်။ 4. အဘခမည်းတော်၏အခြမ်းမှတက်ကြွ: ယရှေုသညျထိုသူတို့အားမိန့်တော်မူခဲ့ကတည်းက "။ သူကဗေသနိရွာထွက် (တပည့်) သူတို့ကိုလမ်းပြတော်မူ၏, သူသည်မိမိလက်ကိုရုပ်သိမ်းသူတို့ကိုကောင်းကြီးမင်္ဂလာ" (လုကာ 24:50) "သူသည်ကောင်းကင်သို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံခဲ့ပါတယ်နှင့် ဘုရားသခင်၏လက်ျာဘက်၌ထိုင်လျက် "(Mk.16: 19) ။
အတူ၎င်း၏ထင်ရှားသောတစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်ခြင်းနှင့်ဘေးဥပဒ်ကိုစရိုက်များဧဒင်ဥယျာဉ်၏ "မြေအောက်" ဥယျာဉ်အတွင်းရှိမြွေရုတ်တရက်ပုံရသည်။ အာဒံနဲ့ဧဝတို့နှစ်ဦးစလုံးကြားမြွေကိုမြင်လျှင်ခဲ့သတိထားမိ။ တကယ်တော့နှစ်ဦးစလုံးပြောသောကြောင့်ဖြောင့်မတ်အနေအထားဖြစ်ခဲ့သည်။ ပရဒိသုအသုံးပြုတဲ့ဘာသာစကား, ကျနော်တို့ကမျြးစာကိုမသိရပါဘူး။ ဒါဟာအထူး "ပရဒိသုဘာသာစကား" တဖြည်းဖြည်းထွက်ကွယ်လွန်သွားခဲ့ကြပေမည်။ ဖြစ်ကောင်းဘာသာစကားကိုအကြားတစ်ဦးက 1 ကောရိန်သု 13 ကပြောပါတယ်ကဲ့သို့: 1: "ငါသည်လူနှင့်အတူ၎င်း, ကောင်းကင်တမန်မပြောတတ်လျှင်။ " ဒါပေမယ့်လည်းနောဧ၏သားရှေမ (ဂျူး), သူ့သားဟေဗာသည် (ဟေဗြဲက (ဘုရားသခင်ကပေးသနားတော်မူ၏သို့မဟုတ်) တစ်ဦးအမှန်တကယ်ဖြစ်လာကြပါပြီနိုင်သည့်တရားခံအဖြစ်ဂျူးလူမျိုးကိုလာမယ့်ဟီဘရူးဘာသာစကားမှယခင်ဘာသာစကား၏တစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာခဲ့ကြောင်းထင်မြင်ယူဆချက်များကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားသည် ), ထို့နောက်ဆဌမအချက်နောက်ပိုင်းတွင်အာဗြဟံသည်, မိမိသားဣဇာက်သည်မိမိသားယာကုပ် (အစ္စရေး),
ယင်းကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်းကြောင့်နောဧရဲ့တစ်နေ့တာရေလွှမ်းမိုးပြီးနောက်ကြောင့်စောငျ့ရှောကျဖို့လည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်အားလုံးမြေကြီးတပြင်တဦးတည်းနှင့်အတူတူပင်ဘာသာစကား (1 ဗိုလ်ချုပ်ကြီး 11) ရက်နေ့မှာမိန့်မြွက်တော်မူ၏။ ဘုရားသခငျသညျဘာသာစကားများသည်ရှက်ကြောက်သည့်အခါအဘယ်သူမျှမကအခြားနားလည်သဘောပေါက်နိုင်အောင်, ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Babel များ၏မျှော်စင်ကိုတည်ဆောက်လူများ, ဟီဘရူးဘာသာစကား၏ပေါ်ပေါက်ရေးများအတွက်တည်နေရာဖြစ်ခဲ့သည်။ နောက်ထပ်ဟီးဘရူး၏စတင်ဖွဲ့စည်းနှငျ့ ပတျသကျ. အခွင့်အလမ်းထင်, အာဗြံသည်ခါနာန်ပြည်သို့ရောက်ရှိလာခဲ့သောတည်နေရာဟေဗြုန်မြို့ (ဟေဗြဲ။ Ivrit) မပါဘဲလုပ်ဖို့အမည်ဖြင့်ဟေဗာသည် (ဟေဗြဲ။ Ibrim) ပေးထားမထားပါဘူး။ သြသဒေါက်ဂျူးဘာသာအတွင်းမှာပဲဟီဘရူးမြင့်မြတ်တဲ့အဖြစ်တနျး။ တောင်မှဧဝံဂေလိခရစ်ယာန်များသည်ကြောင်းဦးတည်ချက်အတွက်ဟီဘရူးမေတ္တာချင်တယ်။
ဒါဟာလျှာ (ဂရိ။ Glossolalia) တွင်စကားပြော, ငါတို့သည်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်၌ရှိကြ၏သည့်အခါနားလည်စာတနျကအကြောင်းကိုခရစ်ယာန်ဘာသာအတွင်းပြန်နှင့်ထွက်လေဝင်လေထွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ မေးခွန်းတခုရှင်းရှင်းလင်းလင်းအဖြေကိုမရနိုင်ပါ။ ကမျြးစာကိုဘာသာစကားပြောခြင်းဘုရားသခင်၏သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူတာဖြစ်ပါတယ် "ကျနော်တို့လျှို့ဝှက်ချက်များစကားပြောရန်က" စစ်မှန်တဲ့ကြောင်းဖော်ပြသည်။ 2: 1 ကောရိန်သု 14 ကပြောပါတယ်အဖြစ် "လျှာအတွက်ပြောတတ်သောသူသည်လူတို့အားဘုရားသခင်ပေးတော်မူရန်စကားမပြောပေ။ သူ၏ဝိညာဉ်လျှို့ဝှက်ချက်များကိုပြောသောအခါ, ဘယ်သူမှသူ့ကိုနားလည်နိုင်သည် "ထို့ပြင်ရောမ 8း26-27" ။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အားနည်းချက်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီပေးသည်ဒါ။ ကျွန်ုပ်တို့အဘို့ဆုတောငျးသငျ့သောအရာကိုမသိကြပေမယ့်ဝိညာဉ်တော်သည်မိမိကိုမိမိစကားများမပါဘဲညညျးတှားနှင့်အတူငါတို့အဘို့အ intercedes ၎င်း, ဘုရားသခင်၏အလိုတော်အတိုင်းဝိညာဉ်သည်သန့်ရှင်းသူအဘို့ဆုတောင်းသောကွောငျ့စိတျနှလုံးကိုစသောသူသည်, ဝိညာဉ်တော်၏အဘယ်အရာကိုစိတ်ကိုသိတယ်သည်။ "
ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့မှားယွင်းသောလျှာရှိစေနိုင်သည်ဟူသောအချက်ကိုပယ်သွားမပြောကြဘူးနေစဉ်။ ဒါဟာဖြစ်, နှင့်ခရစ်ယာန် confessors တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်လျှာအတွက်မိန့်ခွန်းကိုထိန်းချုပ်ခွင့်ပြုပါ, အဖြစ်အများအားဖြင့်အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်နိုင်ပါတယ်။ ရလဒ်အဖြစ်သတိမဲ့များနှင့်ပြဇာတ်နှင့်အတူ nonchalance နှင့်အတူရှိဖောက်ပြန်လျှင်သို့သော်သိသာလည်းနတ်ဆိုးတပ်ဖွဲ့များသည်ဘာသာစကားပြောခြင်းကျော်ယူနိုင်ပါတယ်။ Occultist အသစ်အနေအရွယ်ကလူလုပ်, Satanists ပြုသဘာဝဘာသာတရားမှာ "လျှာတွင်" ပြော၏။ ဟုတ်ပါတယ်, ပင်ရှိ Taoism, ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့်ဟိန္ဒူဘာသာ၏အကြီးအဘာသာတရားဖြစ်သည်။ ဤသည်နတ်ဆိုးသြဇာလွှမ်းမိုးမှုအောက်တွင်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ "ဒါကြောင့်နေ့လယ်တုန်းကသူတို့ကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့သည်ပရောဖက်ပြုဒေါသနှင့်ကျင်းပ (မှော်အတတ်, ငါ့မှတ်စု။ ): ဒါဟာဖြစ်ကောင်းလုံးဝလေထုထဲကယူမဟုတ်, ကသညျဘုရားသခငျ၏ပရောဖကျဧလိယကိုဆန့်ကျင်သူတို့၏ရန်ပွဲများတွင်တောင်ပေါ်ကရမေလတောင်ပေါ်ဗာလ၏ပရောဖကျနဲ့တူပြီနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါသည် ။ : ကဘောဇဉ်ပူဇော်သက္ကာဘို့အချိန်တိုင်အောင် "(1 ဓမ္မရာဇဝင် 18 ရက်
မကောင်းသောအကောင်းနဲ့မကောင်းသောအမှုအမျိုးမျိုးကိုသိကျွမ်းရာအပင်၏အသီးမှာဧဒင်ဥယျာဉ်၏ဥယျာဉ်၌ထငျရှားယခုအချိန်တွင်သူဝိညာဏနှင့်အသွင်သဏ္ဌာန်, မြွေသာမြွေမဟုတ်ခဲ့ပေမယ့်သူကို ယူ. လည်းတိရိစ္ဆာန်နိုငျငံတျော၌တစ်ဦးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမြွေအသုံးပြုမှုကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ လူစီဖာ, စာတန်, မာရ်နတ်, နဂါး, လဝိသန်ပေမယ့်အပြင်နှင့်အတူတစ်ဦးသည်မြွေ၏အသွင်သည်ထင်ရှား: သူဖြောင့်မတ်ကိုယ်ဟန်အနေအထားရှိခဲ့ပါတယ်။ ဖြစ်ကောင်းစုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကိုခံစေခြင်းငှါအာဒံနဲ့ဧဝတို့အဘို့လွယ်ကူစေရာတစ်ခုခု။ ထိုအခါဘုရားသခင်, မြွေနှင့်အတူစားသုံးမှုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခြင်းနှင့်မြွေ၏အသွင်, 1 ကမ်ဘာဦး 3:14 အတွက်စာသားမဖတ်နိုင်: "ထိုအခါထာဝရအရှင်ဘုရားသခင်သင်တို့ရှိသမျှသည်သိုးနွားအထက်တွင်ကိုကျိန်ဆဲခြင်း, ရိုင်းပါလိမ့်မယ်, သင်သည်ဤအမှုကိုပြုပါပြီ serpent'Eftersom အားဆို၏ တိရိစ္ဆာန်များ။ ကိုယျတျော၏ဝမ်းအပေါ်သို့ယျတျောသညျသှားကွလိမျ့မညျ, မြေကြီးကိုသင်နေသမျှကာလပတ်လုံးသင်ကလီဗာအဖြစ်ကိုစားသင့်တယ်။ '' reverb "" ဟာတစ်ပိုဒ်လိုပဲ "ဖြစ်ကောင်း, ဘုရင် Cobra ခြောက်လမီတာရှည်လျားထိကြီးထွားနှင့်၎င်း၏အလျား၏သုံးပုံတပုံအထိရနိုင်သည်။ မြွေ Charmer ထမညျမြွေရည်ရွယ်သည်။ Kundaliniormen - အရှေ့ပိုင်းဝိညာဉ်ရေးအတွက်ထူးခြားတဲ့ယောဂအတှေ့အကွုံတည်ရှိ။ တစ်ဦးကဝိညာဉ်ရေးရာမြွေ ihopslingrad လူ့ဖြစ်လျက်ရှိ၏စအိုမှာအိပ်ကိုဆိုလိုသည်။ တရားအားထုတ်စဉ်အတွင်းမြွေပေါ်မှာစီးစေလျက်, တရားအားထုတ်အထက်သို့ရွှေ့နှင့်ဒီဂရီမျဉ်းကိုခေါ်ဝိညာဏရုပ်သံလိုင်းစနစ်, မှတစ်ဆင့်ကျောရိုးတစ်လျှောက်ကိုလိုက်နာရန်စတင်နိုင်ပါသည်။ လူကြိုက်များပေမယ့်အန္တရာယ်ဆင်ခြင်ငါဘော်ပြရမည်။
ဒါဟာစုံစမ်းသွေးဆောင်တတ်သောသူမှအရှုံးမပေးဖို့မလူ့ pair တစုံဘို့ခဲပိုမိုလွယ်ကူခဲ့တယ်, ထို့နောက် snakelike မိန့်မြွက်တော်မူ၏။ ပရဒိသုအချင်းချင်းဆက်သွယ်ဖို့ဘာသာစကားမှတဆင့်တိရိစ္ဆာန်များနှင့်လူများအတွက်စွမ်းရည်ရှိခဲ့ပါသည်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျနော်တို့ဆက်စပ်ဒါမှမဟုတ်သမ္မာကျမ်းစာမှမဟုတ်ရင်ပြောသည်မရနိုင်ပါ။ ဝန်ခံရမည်ဣသရ (4 ထှကျမွောကျရာ 22) ဆန့်ကျင်သစ္စာဖောက်များ၏လမ်းလွန်သူကိုပရောဖက်သည်ဗာလမ်၏သမ္မာကျမ်းဇာတ်လမ်းအတွက်နောက်ပိုင်းမှာမြည်းမိန့်မြွက်တော်မူ၏။ သို့သော် 28 ကျမ်းပိုဒ် says: "? သခင်ဘုရားကိုမြည်း၏နှုတ်ကိုဖွင့်, သူ Balaam'Vad ဟုမိနျ့သင်သည်သုံးကြိမ်ငါ့ကိုရိုက်နှက်နေသောကြောင့်ထိုအခါငါသင်ပြုမိပါပြီ" ဗာလမ်သည်ကိုသင်ငါ့ကိုလူမိုက်လုပ်ပြီးပြီ 'မြည်းဖြေကြား! ငါသည်ငါ့လက်၌ဓားခဲ့လျှင်, ငါသည်ယခုတူးအသတ်ခံခဲ့ကြလိမ့်မယ်။ '' ဒီမြည်းကိုဗာလမ်က, 'ငါသင်၏မြည်းကိုမဟုတ်, သငျသညျယနေ့တိုအားလုံးသင်၏အသက်တာစီး? နည်းစဉ်အမြဲငါသည်သင်ကြောင်းပြုပါရန်အသုံးပြုကြပါပြီ "သူဟာ replied: 'Nej ။ '"
ဒါကြောင့်ဣသရေလအမျိုး၏နိုငျငံတျော၏အနာဂတ်ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ဘာသာစကားစွမ်းရည်နှင့်အတူရှိကိုဘယ်လို, လူများနှင့်တိရိစ္ဆာန်များအကြားဆက်ဆံရေးအတွက်ကျနော်တို့အဘယ်သူမျှမရှင်းလင်းသောစက္ကူရယူပါ။ ဒါပေမဲ့ဟေရှာယ 11 နှင့်အညီ: 8, အမှန်တကယ်ဖြစ်လာဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုအောက်ပါနီးပါးမဖြစ်နိုင်သောကြားဆက်ဆံရေး: "။ တစ်ခုကမွေးကင်းစကလေးတစ်ဦးနို့ကွာသောသူငယ်မြွေရဲ့မျက်စိအဆိပ်ထွက်ရောက်ရှိဖို့, မြွေဆိုးတွင်းမှာဆော့ကစားပါလိမ့်မယ်" တစ်ည 1992 ခုနှစ်တွင်ယူဂန်ဒါအတွက်ရွာ၌ငါအတွက်နှိုး ထိုသို့အခန်းထဲမှာအစေးသည်မှောင်မိုက်ကိုငါ့တံခါးကိုအပြင်ဘက်မြေ၏စိတ်လှုပ်ရှားအသံနှင့်အမျိုးအစားများအသံကိုကြားရ၏။ ဒါကြောင့်မကြာမီဆင်းငြိမ်သက်သွားစေသကဲ့သို့ငါကြိုးစားပြန်အိပ်သွားကြဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ်။ နံနက်ယံ၌, ငါသည်သူတို့၏ဓာတ်မီးကို အသုံးပြု. အစောင့်တစ်ဦးအလွန်အဆိပ်ပြင်းမြွေတံခါးကိုထားလိုက်တော့၏အောက်ခြေတွင်တစ်ခုဖွင့်လှစ်မှတဆင့်အခန်းထဲမှာသို့သွားခဲ့ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းထိုညဉ့်ယူခဲ့သညျ။ ငါပုံရိပ်ကိုဆိုင်သောအသေကောင်အပေါ်မြွေရှိသည်။
ကောင်းပြီ, သူတို့ဘဝ၌လူအဖြစ်မြွေသူတို့ရဲ့ရှာဖွေရေးတာဝနျမှာ - ဒုစရိုက်အပြစ်၏အဖြစ်မှန်, ရုတ်တရက်သူတို့ "အဝတ်အချည်းစည်း" ဖြစ်ကြောင်းအာဒံနဲ့ဧဝကိုတွေ့ရှိ။ တစ်ခုခုအရေးပါအနုတ်လက္ခဏာကသူတို့ရဲ့ဝိညာဉ်စိတ်နှင့်ခန္ဓာကိုယ်မှ, အားလုံးအဆင့်ဆင့်ဖြစ်ပေါ်နေပါသည်။ သူတို့ကလူသားမျိုးနွယ်၏ဝါဒဖြန့်ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြလို့လိင်ဆက်ဆံများအတွက်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီတောင်မှရှိရာ။ သို့သော်ဤကာမဂုဏ်နှင့်ရင်းနှီးသောစံနမူနာအဖြစ်, ဘုရားသခငျ၏သနျ့ရှငျးခွငျးနှင့်ဘုန်းအသရေတစျမြိုးဖြင့်ကာကွယ်ထားပြီမှပေါ်လာ "လူကိုများနှင့်အမျိုးသမီးတစ်ဦးနှစ်ဦးစလုံးအဝတ်အချည်းစည်း ရှိ. , သူတို့တစ်ဦးချင်းစီကတခြားရှေ့၌အဘယ်သူမျှအရှက်ကွဲခြင်းကိုခံစားရတယ်။ " ဧဒင်ဥယျာဉ်၏ဥယျာဉ်၌ဘုရားသခင်ထံမှဖုံးကွယ်ဖို့အာဒံနဲ့ဧဝကိုအချိန်, ဝိညာဉ်ရေးရာ / ဘာသာရေးရှာဖွေနေသူပေါ်ပေါက်ကြောင်းဟုခေါ်ဝေါ်ခြင်းကိုခံရနိုင်မီ: ငါတို့သည် 1 ကမ်ဘာဦး 2:25 အတွက်ဖတ်ပါ။ ထိုသို့စတင်တော်မူသောဘုရားသခင်၏ဖြစ်ပါသည်: "ဒါပေမယ့်ထာဝရအရှင်ဘုရားသခင်သည်လူကိုခေါ်နဲ့သူ့ကိုရန် said: ။ ''? var သင်" '
အာဒံနဲ့ဧဝကဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ရောကျ လာ. , ဒါကြောင့်အဝတ်အချည်းစည်းဖြစ်ခြင်းကြောင့်သူတို့သည်ရှက်ကြောက်ခြင်းသို့များ၏ပုန်းအောင်းဖို့သာရည်ညွှန်းပေမယ့် - ပြီးတော့နှင့်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားပေါ်နှင့်ကမြွေများကလှည့်ဖြားခံတော်မူပြီးမှ၏ကျဆုံးခြင်းအပြစ်တင်ပါတယ်။ ဘုရားသခငျသညျသူတို့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအချည်းစည်းရှိခြင်းဖုံးကွယ်နိုင်အောင်, သူတို့ကိုအရေခွံ၏အင်္ကျီကိုပေး၏သူတို့ချက်ချင်းသူတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာအချည်းစည်းရှိခြင်းများအတွက်မဆို "ကာကွယ်စောင့်ရှောက်" စွန့်လွှတ်နိုင်အောင်မပေးဆိုလိုသညျ။ ဒါပေမယ့်တကယ်တော့ကျဆုံးနေတဲ့သုံးဆ်ဗလာအတွက်ရလဒ်ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုသူအပေါင်းတို့သည်, ခညျြနှောငျကိုချွတ်, အချည်းနှီးသောတပါးတည်းသာ "အဝတ်အချည်းစည်း" ဖြစ်လာခဲ့သည်။ အဆိုပါ sequence ကိုအသက်ပင်မှလမ်းကိုစောင့်ရှောက်ရန် "အရှေ့ဘက်တွင်" ဧဒင်ဥယျာဉ်ထဲကနေအာဒံနဲ့ဧဝကို "လွှတ်လိုက်" နှင့်änglakeruberထားဘုရားသခင်နှင့်အတူအဆုံးသတ်ထားသည်။ ဒါပေမယ့် unforgiven အပြစ်များကိုအတူ - ဖြစ်နိုင်ယခုအသက်ပင်ဝင်ရောက်နှင့်ကြည့်ရှုခြင်းမှကျရောက်နေတဲ့လူတွေပြစ်မှားသည်၎င်း၏အသီးကိုစားခြင်းနှင့်အစဉ်အမြဲအသက်ရှင်တားဆီးကာကွယ်ရန်။ အခုတော့ဝိညာဉ်ရေးရာ / ဘာသာရေးရှာပုံတော်အပြည့်အဝပြင်းထန်မှုနှင့်အတူစတင်ထား၏။ ပထမဦးဆုံးလူသားများအတွက်သူတို့ရပ်ရွာကိုဆုံးရှုံးကြောင်းပြန်ဘုရားသခင်အား၎င်းတို့၏လမ်းကိုရှာဖွေနိုင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ တဖန်ဘုရားသခင်၏ညှနျကွားခွငျးအားဖွငျ့ကျော်မဟုတ်ခဲ့ပေ။ အဘယ်သူမျှမကယခုသူအကြီးအကငျြ့မြား၏သီခငျြးမြားစတင်ခဲ့သည်။ တစ်ဦးကမျြးစာသငျအပိုင်းထို့ကြောင့်ကိုဖတ်ရှုခဲ့သည်: "အရှင်ထာဝရဘုရားကိုရှာသောမဆို, နားလည်သောသူမဆိုရှိပါတယ်လျှင်ကြည့်ဖို့လူသားတို့အပေါ်ကောင်းကင်ကငုံ့ကြည့်။ " (ဆာလံ 14: 2)
အာဒံနဲ့ဧဝကိုပရဒိသုစွန့်ခွာခြင်းအလိုငှါတချိန်တည်းမှာပင်, လေတိုက်ခတ်သို့မဟုတ်လည်းမြွေထွက် crawls ။ သူ၌သွား၏ပေမယ့်အထဲကရောက်ခဲ့တဲ့။ သို့သော်သူသည်ဘုရားသခင်၏သို့မဟုတ်လူသားတို့၏ဖန်တီးမှုကနေပျောက်ကွယ်သွားကြောင်းမဆိုလိုပါ။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်အနည်းငယ်လူ့ pair တစုံမတိုင်မီပရဒိသုကနေနှင်ထုတ်ခံရ, သူတို့၏ငြိုးပြင်ပနှင့်အသစ်သွေးဆောင်နှင့်အတူထိုသူတို့အဘို့စောင့်ဆိုင်းနေခဲ့ပါသည် ( "တွားတတ်သောတိရစ္ဆာန်မျိုး" LAT ။ REPTILIS ၏) reptilian မကောင်းသောအဖြစ်လာခဲ့သည်။ ပေါလုကကောရိန်သုဖို့သတိပေးရေးသားခဲ့သည် (2 11: 3): "ဒါပေမယ့်ငါကသူ့ကောက်ကျစ်ခြင်းဖြင့်မြွေကဧဝကိုလှည့်, ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့စိတ်ကိုပယ်ရှားသည်ခရစ်တော်၏ဖို့ဏုစစ်မှန်တဲ့စင်ဆည်းကပ်လွှဲယိုယွင်းရပါမည်သငျ့သညျအဖြစ်ကြောက်လန့်ဖြစ်၏။ "
ဒါဟာအကြီးအဝိညာဏရှာပုံတော်လူသားတွေအတွက်ပေါ်ထွန်းသောဤအချက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ယင်းနောက်တဖန်ဘုရားသခင်နှင့်အတူအပြည့်အဝတျသဟာယအတွက် "ပရဒိသုဆုံးရှုံးခဲ့ရ" နှင့်လူသားဘုရားသခငျ့ရေရှည်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ, ဥပမာ, အနာဂတ်ကာလ၌တွေ့ဘို့အတောင့် စကားတော် (3:11) နဲ့ဒေသနာ: "ဒါ့အပြင်ထာသူယောက်ျား၏စိတ်နှလုံးအထဲ၌သွင်းထားခဲ့ပါသည်။ သို့သျောလညျးသူတို့ရှေ့ဦးစွာ မှစ. အဆုံးတိုင်အောင်, ဘုရားသခင်၏အမှုတော်ကိုနားမလညျနိုငျသညျ။ "
သူတို့ပရဒိသုကျက်စားရာထဲကလာသောအခါအာဒံနှင့်ဧဝကိုစောင့်ဆိုင်းတိုက်ရိုက်မှော်အတတ်ဒြပ်စင်နှင့်အတူသို့မဟုတ်မပါဘဲပမာဏကိုဘာသာတရား။ "နတ်ဆိုးတို့၏အယူဝါဒ" (1 တိ 4: 1) ရပ်တည်ချက်ကြောင်နဲ့ခွေးအထဲကအရှေ့ "ဆိပ်ကမ်းကို" ပယ်လာသည်ဟုအမျိုးမျိုးသောအမျိုးအစားများ, အမှားအယွင်းများ။ သူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးသားကာဣနဘာသာရေးရှာဖွေနေသူသူမိမိကိုမိမိတစ်ဦးမှားနှင့် egotrippat လမ်းအတွက်ဘုရားသခင်အားပူဇော်ဖို့အရူးလုပ်ခံရပါစေမြွေအားဖြင့်ဖြစ်သကဲ့သို့သြဇာလွှမ်းမိုးမှု, ဘုရားသခင်မှမှားယွင်းသောခဲ့ကြသည်။ ဘုရားသခငျသညျအတွက်ယုံကြည်ချက်၌ပြစ်မှားမိခဲ့ပါတယ်နှင့်စစ်မှန်သောနှင့်နှိမ့်ချလမ်းအတွက်ကောက်ယူခဲ့ပါတယ်အဖြစ်တဲ့အခါမှာသူ့ညီအာဗေလ, ဘုရားသခင်မှ၎င်း၏ပူဇော်သက္ကာကိုကယ်တင်တတ်၏။ အဆိုပါရလဒ်ဘုရားသခငျသညျအာဗလေရဲ့ယဇျပူဇျောကိုလက်ခံသော်လည်းမကာဣန၏, အလှည့်ရှိသူ၏ဆိုးယုတ်သောအပြောင်းအရွှေ့အတွက်ကာဣနမှဦးဆောင်ရသောမိမိညီကိုသတ်ကြောင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ 1 ယောဟနျ 3:12 တစ်ဦးအထူးသဖြင့်ဥပမာအဖြစ်, တကလေးသည်ဒုစရိုက်နှင့်သူ့အစ်ကိုအသတ်ခံရသောကာဣန "ကဲ့သို့ဖြစ်မဒီအဖြစ်အပျက်တက်သည်။ အဘယျကွောငျ့ကာဣနသူ့ကိုသတ်ဖြတ်? ကောင်းပြီ,
ချက်ပြုတ်ဘို့တ - - ပျောက် / ဖွုနျးတီးသောသား၏ဥပမာအနကျအဓိပ်ပါယျတစ် post ကိုပုံဥပမာအဖြစ်သယ်ဆောင်အဖြစ် "။ ဖျက်သိမ်းဘဝနှင့်သူ၏ဥစ္စာကိုဖွုနျးတီး" ဧဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာကျဆုံးခြင်းနှင့်များ၏စောဒနာဖို့ကသားတစ်ဦးသို့ရေးဆွဲခဲ့ကွောငျးပွောနိုငျ ဒါကြောင့်သူကတစ်ဦးပြင်းထန်အစာခေါင်းပါးသောအခါပြည်ကိုအုပ်စိုးတို့သည် လာ. အဖြစ်အနည်းဆုံးစားရန်တစ်ခုခုရဖို့ရန်, အဲဒီမှာဝက်ပိုင်ရှင်များမှတစ်ကျွန်ကဲ့သို့မိမိကိုမိမိနှင့် sinker ပေးသောနောက်တော်သို့လိုက်ပေမယ့်မပေးတောင်မှဝက်အစားအစာတွင်သူယူခဲ့ပါတယ်။ ထို့အပြင်ကျွန်ယာဉ်မောင်းသူသည်ဝက်ပိုင်ရှင်, "နတ်ဆိုးမင်းသား (ဝက်, ငါ့မှတ်စု။ )" (မဿဲ 12:24), Beelzebub ကဲ့သို့ပင်နိုင်ငံရေးပါတီများကင်းမဲ့သောပုံရိပ်ကိုအမှတ်ဖြစ်ပါတယ်။
သခင်ဘုရား၏ SEARCH ကယျတငျတျောမူခွငျး
ဤဝိညာဏအဖြစ်မှန်ခုနှစ်တွင်လည်းကျနော်တို့ယနေ့လူကဲ့သို့ဖြစ်၏။ အပြစ်နှင့်ဖြောင့်မတ်များအကြားအကောင်းနှင့်မကောင်းသောအကြားရှိvillolärigaတရားနှင့်သစ္စာတရားကိုအကြားရွေးကောက်ပွဲတွင်ကျွန်တော်, စေသော - ကောင်းသောရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ကိုရှေးခယျြ, ယခုရွေးချယ်ပါ။ ဘုရားမဲ့ဝါဒ, evolutionism, လူ့နဲ့မှော်အတတ်ဖို့ကိုဖွင့်မထားပါနဲ့။ သို့သော်ကိုသာထာဝရဘုရား, ဖန်ဆင်းရှင်နှင့်ကယ်တင်ရှင်စစ်မှန်တဲ့နှင့်မေတ္တာရှင် "မျက်နှာ" ကိုရှာခြင်း: "ငါ့ကိုရှာသောသူတို့သည်သူတို့သညျငါ့ကိုရှာပါ။ " (သု 8:17) "သူတို့ကအရာအားလုံးကိုနားလည်ထာဝရဘုရားကိုရှာသောသူတို့သညျ။ " (သု 28: 5) "ရှာရန် ပထမဦးဆုံးသူ၏နိုင်ငံကိုနှင့်သူ၏ဖြောင့်မတ် "(မဿဲ 6:33)" အခွန်ခံများနှင့်ဆိုးသောသူတို့သညျယရှေုကိုသူတို့လမ်းကိုဖန်ဆင်း "(လုကာ 15.1)" ငါ့ကိုရှာရန်, သငျသညျအသကျရှငျရ "(အာမုတ် 5: 4)" ။ ။ ။ သခင်ဘုရားသည်စိတ်ဝိညာဉ်၌ကောင်းသောဖြစ်ပါသည် ။ (ဟေဗြဲ 11: 6) သူ့ကို "" ။ သူကသူ့ကိုရှာသောသူတို့သည်ဆု "ရှာကြံ
ငါသည်ဘုရားသခင်၏စီးဆင်းမှု ပို. ပင်frälsningsnådဘယ်မှာအပြစ်, ရှိသညျဘယ်မှာကြောင်း, သမ္မာကျမ်းစာနှင့်အညီအဆုံးအဖြတ်အားဖြင့်ကောက်ချက်ချ။ Fall နှင့်၎င်း၏အကျိုးဆက်များကြောက်မက်ဘွယ်သောနှင့်လေးနက်ဖြစ်ကြသည်။ ဒါပေမယ့်ခွင့်လွှတ်ခြင်းသားတော်မှတဆင့်အလုပ်လုပ်တယ်, သခငျယရှေု, သူတို့ရဲ့ဒီဇိုင်းနှင့်ရည်ရွယ်ချက်မှအံ့သြစရာများနှင့် ပို. ပင်နက်ရှိုင်းသည်။ သာ. သူဖြစ်ပါသည်, ထိုကိစ္စတွင်ကြီးမားသောခဲ့ပေမယ့်ပွနျလညျထူထောငျ သာ. ကြီးမြတ်သည်။ ကျနော်တို့ (မကောင်းသောအထံမှ) ရွေးနှုတ်ခြင်းကျေးဇူးရှိကိုယ်တော်ကိုခုနှစ်တွင် "(ယောဟန် 8:36)" ။ သားတော်သငျသညျအခမဲ့စေသည်လျှင်သင်အမှန်တကယ်အခမဲ့ဖြစ်ကြောင်း "(ယောဟန် 8:32)" အမှန်တရား (ယရှေု) ။ သငျသညျအခမဲ့လုပ်ရမည် "နှင့်ရှိပါတယ် ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်လွှတ်ခြင်း။ ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ကျွန်ုပ်တို့၏ဖြောင့်မတ် "(1 ကော 1:30)" (ကောလောသဲ 1:14) ယေရှုဖြစ်လာသည် "။
အဲဒီလူရဲ့ပြောင်းလဲခြင်းမှာသူနှင့်အတူဘုရားသခင့ငျ့ခှငျ့လှတျများနှင့်ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး, ပေါ်မှာယေရှုရဲ့နာမတော်၌ပဌနာမှာတိုက်ရိုက်ရာအရပ်ကိုကြာ: ကြိုဆိုပါတယ်အိမ်, တစ်နည်းအတွက်! ဧဝံဂေလိတရားကို Power, ထို့နောက်မှောငျမိုကျကနေအပြည့်အဝပွနျလညျထူထောငျမှတက်, အနာ, လက်အထက်တွင်, မှီခို, ဖြစ်စဉ်ကို-ကဲ့သို့ stepwise ပြုမူ - အဘယျသို့ပွစျဖွရောလက်ထပ်နှင့် depredations ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့တယ်။ ပေတရုသည်စကားများအားဖြင့်တမန်တော် 2:40 ၌ဟောပြော: "ဒီရှောင် (ကောက်သော / မကောင်းသောအ) မျိုးဆက်ကနေသင်တို့ကိုကယ်နှုတ်တော်မူပါစေ။ " ကဝိညာဏ / ဘာသာရေး "အဝိဇ္ဇာ" ၏နောင်တရရန်အချိန်ကြောင်းတမန်တော် 17:30 အတွက်ပေါလု၏ဟောပြောခြင်း။ ခမညျးတျောရန် "ဖွုနျးတီး / ဆုံးရှုံးသွားသောသား" ပြန်လာ၏ပုံရိပ်တစ်ခုအဖြစ်ကိုယူ: "ပြီးတော့သူထနှင့်သူ၏ဖခင်မှ (ရှာဖွေရေးနေအိမ်) သွားလာ၏။ " သူ့ရဲ့သားဝက်ပိုင်ရှင်အတွက်ကျွန်ခံရာမှကြွတော်မူသောအခါ (ကျနော်တို့ဖြစ်ပျက်အကြောင်းကိုသိကြမည်မဟုတ်။ ) အလှည့်အတွက်ဖခင်မှထွက်ပြီးသားဖြစ်ခဲ့သည်နှင့်အတိုင်းအမိန့်ကျနော်တို့မသိရပါဘူးဘယ်သူကိုအဘို့မိမိသားအဘို့ထိုသို့ကြည့်ရှုကြ၏။ ဒါပေမယ့်သူကနောက်ဆုံးတော့သူဝက်, အနံ့ညစ်နှင့်လမ်းနေအိမ်အပေါ်လှည့်လည်လာနေတာတွေလည်းရှိရာ, အဝေးကသူ့ရဲ့ "နောင်တရခြင်း" သားမြင်စေခြင်းငှါ: "သူကတာရှည်လမ်းပိတ်ထားတုန်းပဲဖြစ်ခဲ့သည်နေစဉ်, သူ့ဖခင်ကသူ့ကိုမြင်သဖြင့်သူ့ကိုသနားရှိခဲ့ပါတယ်။ အဘသည်သူ့ကိုခရီးဦးကြိုပြုခြင်းငှါပြေးသည်သူ၏လည်ပင်းပေါ်မှာလှဲခြင်းနှင့်သူ့ကိုနမ်း။ "
8: 'dot နှစ်ခုကျမ်းစာကိုအမှီ ပြု. တလက်, ယာကုပ်3ရက်နေ့တွင်, ဒီမှာတာမျိုး "ကိုဘုရားသခင်အားအနီးရှိ Draw နှင့်သူသည်သင်တို့အနီးသို့ဆွဲပါလိမ့်မယ်။ " ထိုအခါအခြားတစ်ဖက်တွင်, ဗြာဒိတျ 3:20: "ငါသည်တံခါးရှေ့မှာရပ်။ ခေါက်လျက်နေ၏ အကြင်သူသည်ငါ၏အသံကိုကြားတံခါးကိုဖွင့်လှစ်လျှင်, ငါသူ့ကိုမှကြွလာတော်မူခြင်းနှင့်သူနှင့်အတူစားသောက်, သူသည်ငါနှင့်အတူပါ။ "သားတော်, အပြစ်တရား၏ဝန်ခံ," ငါပြစ်မှားပါပြီ "နှင့်မဟာကျေးဇူးတော်များ၏လိုအပ်ချက်များ," ငါဖြစ်မဟုတ်တော့ခံထိုက်ဖြစ်ကြောင်းကိုပါလိမ့်မယ် ကိုယ်တော်၏သား ဟူ. ခေါ် "ဖြစ်စဉ် hemkomstens အတွက်အများအပြားခြေလှမ်းများမှဦးဆောင်:" ဒါပေမယ့်ဖခင်သည်သူ၏အစေခံကျွန်တို့အားဆို၏: အကောင်းဆုံးဝတ်လုံကိုထုတ်ရောက်စေဖို့အလျင်အမြန်နဲ့သူ့ကိုပေါ်မှာဝတ်နှင့်သူ၏ခြေထောက်ပေါ်မိမိလက်နှင့်ဖိနပ်အပေါ်တစ်ဦးလက်စွပ်ကိုတင်! ထိုအခါဆူအောင်ကျွေးသောနွားကလေးကိုရသတ်, ငါတို့ပျော်မွေ့စားကြစေ။ ငါ့သားဘို့သေပြီးမှတဖန်အသကျရှငျတျောမူ၏သူကိုဆုံးရှုံးခဲ့တွေ့ရှိရပါသည်။ ထိုအခါပါတီစတင်ခဲ့သည်။ "မှောင်မိုက် မှစ. အလင်းမြွေရဲ့ခေါင်းကိုလုံးဝ (ရောမမြို့ 16:20) နှိပ်စက်ခြင်းကိုခံရခံရဖို့အကြောင်းပါ။ စာတနျကမကြာမီအစဉ်အမြဲnäpsasပါလိမ့်မယ်။ ဝိညာဏသည်ဒုစရိုက်နောက်ဆုံးမှာအမြဲလက်နက်မဲ့ဖြစ်လိမ့်မည်။ လဲကောင်းကင်တမန်တို့အဘို့မကယ်တင်ရှိသေး၏။ စာတန်နှင့်သူ၏ minions တဖြည်းဖြည်းငရဲသွားနေကြသည်။ သို့သော်တစ်ဦးယုံကြည်ခြင်းတရားကိုသူအချင်းလူသား, ပြီးသားဘုရားသခင်အားပြန်လာသောခံရဖို့တစ်လမ်းအတွက်ယုံကြည်ခြင်းနှင့်2တိမောသေ 1 မှာရှင်ပေါလုကဲ့သို့အပြောနိုင်ဘို့: 2: "ငါယုံကြည်သောအဘယ်သူကိုငါသိ၏။ " နှင့်ရောမ 8:16: "ဝိညာဉ်တော်ငါတို့သည်ဘုရားသခင်၏သားဖြစ်ကြသည်တော်သည်ငါတို့၏ဝိညာဉ်နှင့်အတူသက်သေခံတော်မူ၏။ " ကျနော်တို့က "တစ်ဦးပွဲတော်လူအစုအဝေး, ကောင်းကင်၌ရေးထားလျက်ရှိ၏၎င်းတို့၏အမည်များကိုသူ၏သားဦး၏အသင်းတော်တစ်ခု" (ဟေဗြဲ 12:23) ဖြစ်ကြသည်။ "ဒါပေမယ့်သင်ကရှေးခယျြသောလူမျိုး, တစ်ဦးတော်ဝင်ယဇ်ပုရောဟိတ်တစ်ဦးသန့်ရှင်းသောလူမျိုး, မိမိအံ့သြဖွယ်အလင်းထဲသို့မှောင်မိုက်ထဲကသင်တို့ကိုခေါ်တော်မူသောသူကိုသူ၏ဘုန်းကြီးသောအကျင့်ကိုကြားပြောစေခြင်းတစ်ဦးပိုင်ထိုက်သောလူဖြစ်ကြ၏။ " (1 ပေ2း 9) စာတနျကမကြာမီအစဉ်အမြဲnäpsasပါလိမ့်မယ်။ ဝိညာဏသည်ဒုစရိုက်နောက်ဆုံးမှာအမြဲလက်နက်မဲ့ဖြစ်လိမ့်မည်။ လဲကောင်းကင်တမန်တို့အဘို့မကယ်တင်ရှိသေး၏။ စာတန်နှင့်သူ၏ minions တဖြည်းဖြည်းငရဲသွားနေကြသည်။ သို့သော်တစ်ဦးယုံကြည်ခြင်းတရားကိုသူအချင်းလူသား, ပြီးသားဘုရားသခင်အားပြန်လာသောခံရဖို့တစ်လမ်းအတွက်ယုံကြည်ခြင်းနှင့်2တိမောသေ 1 မှာရှင်ပေါလုကဲ့သို့အပြောနိုင်ဘို့: 2: "ငါယုံကြည်သောအဘယ်သူကိုငါသိ၏။ " နှင့်ရောမ 8:16: "ဝိညာဉ်တော်ငါတို့သည်ဘုရားသခင်၏သားဖြစ်ကြသည်တော်သည်ငါတို့၏ဝိညာဉ်နှင့်အတူသက်သေခံတော်မူ၏။ " ကျနော်တို့က "တစ်ဦးပွဲတော်လူအစုအဝေး, ကောင်းကင်၌ရေးထားလျက်ရှိ၏၎င်းတို့၏အမည်များကိုသူ၏သားဦး၏အသင်းတော်တစ်ခု" (ဟေဗြဲ 12:23) ဖြစ်ကြသည်။ "ဒါပေမယ့်သင်ကရှေးခယျြသောလူမျိုး, တစ်ဦးတော်ဝင်ယဇ်ပုရောဟိတ်တစ်ဦးသန့်ရှင်းသောလူမျိုး, မိမိအံ့သြဖွယ်အလင်းထဲသို့မှောင်မိုက်ထဲကသင်တို့ကိုခေါ်တော်မူသောသူကိုသူ၏ဘုန်းကြီးသောအကျင့်ကိုကြားပြောစေခြင်းတစ်ဦးပိုင်ထိုက်သောလူဖြစ်ကြ၏။ " (1 ပေ2း 9) စာတနျကမကြာမီအစဉ်အမြဲnäpsasပါလိမ့်မယ်။ ဝိညာဏသည်ဒုစရိုက်နောက်ဆုံးမှာအမြဲလက်နက်မဲ့ဖြစ်လိမ့်မည်။ လဲကောင်းကင်တမန်တို့အဘို့မကယ်တင်ရှိသေး၏။ စာတန်နှင့်သူ၏ minions တဖြည်းဖြည်းငရဲသွားနေကြသည်။ သို့သော်တစ်ဦးယုံကြည်ခြင်းတရားကိုသူအချင်းလူသား, ပြီးသားဘုရားသခင်အားပြန်လာသောခံရဖို့တစ်လမ်းအတွက်ယုံကြည်ခြင်းနှင့်2တိမောသေ 1 မှာရှင်ပေါလုကဲ့သို့အပြောနိုင်ဘို့: 2: "ငါယုံကြည်သောအဘယ်သူကိုငါသိ၏။ " နှင့်ရောမ 8:16: "ဝိညာဉ်တော်ငါတို့သည်ဘုရားသခင်၏သားဖြစ်ကြသည်တော်သည်ငါတို့၏ဝိညာဉ်နှင့်အတူသက်သေခံတော်မူ၏။ " ကျနော်တို့က "တစ်ဦးပွဲတော်လူအစုအဝေး, ကောင်းကင်၌ရေးထားလျက်ရှိ၏၎င်းတို့၏အမည်များကိုသူ၏သားဦး၏အသင်းတော်တစ်ခု" (ဟေဗြဲ 12:23) ဖြစ်ကြသည်။ "ဒါပေမယ့်သင်ကရှေးခယျြသောလူမျိုး, တစ်ဦးတော်ဝင်ယဇ်ပုရောဟိတ်တစ်ဦးသန့်ရှင်းသောလူမျိုး, မိမိအံ့သြဖွယ်အလင်းထဲသို့မှောင်မိုက်ထဲကသင်တို့ကိုခေါ်တော်မူသောသူကိုသူ၏ဘုန်းကြီးသောအကျင့်ကိုကြားပြောစေခြင်းတစ်ဦးပိုင်ထိုက်သောလူဖြစ်ကြ၏။ " (1 ပေ2း 9) စာတန်နှင့်သူ၏ minions တဖြည်းဖြည်းငရဲသွားနေကြသည်။ သို့သော်တစ်ဦးယုံကြည်ခြင်းတရားကိုသူအချင်းလူသား, ပြီးသားဘုရားသခင်အားပြန်လာသောခံရဖို့တစ်လမ်းအတွက်ယုံကြည်ခြင်းနှင့်2တိမောသေ 1 မှာရှင်ပေါလုကဲ့သို့အပြောနိုင်ဘို့: 2: "ငါယုံကြည်သောအဘယ်သူကိုငါသိ၏။ " နှင့်ရောမ 8:16: "ဝိညာဉ်တော်ငါတို့သည်ဘုရားသခင်၏သားဖြစ်ကြသည်တော်သည်ငါတို့၏ဝိညာဉ်နှင့်အတူသက်သေခံတော်မူ၏။ " ကျနော်တို့က "တစ်ဦးပွဲတော်လူအစုအဝေး, ကောင်းကင်၌ရေးထားလျက်ရှိ၏၎င်းတို့၏အမည်များကိုသူ၏သားဦး၏အသင်းတော်တစ်ခု" (ဟေဗြဲ 12:23) ဖြစ်ကြသည်။ "ဒါပေမယ့်သင်ကရှေးခယျြသောလူမျိုး, တစ်ဦးတော်ဝင်ယဇ်ပုရောဟိတ်တစ်ဦးသန့်ရှင်းသောလူမျိုး, မိမိအံ့သြဖွယ်အလင်းထဲသို့မှောင်မိုက်ထဲကသင်တို့ကိုခေါ်တော်မူသောသူကိုသူ၏ဘုန်းကြီးသောအကျင့်ကိုကြားပြောစေခြင်းတစ်ဦးပိုင်ထိုက်သောလူဖြစ်ကြ၏။ " (1 ပေ2း 9) စာတန်နှင့်သူ၏ minions တဖြည်းဖြည်းငရဲသွားနေကြသည်။ သို့သော်တစ်ဦးယုံကြည်ခြင်းတရားကိုသူအချင်းလူသား, ပြီးသားဘုရားသခင်အားပြန်လာသောခံရဖို့တစ်လမ်းအတွက်ယုံကြည်ခြင်းနှင့်2တိမောသေ 1 မှာရှင်ပေါလုကဲ့သို့အပြောနိုင်ဘို့: 2: "ငါယုံကြည်သောအဘယ်သူကိုငါသိ၏။ " နှင့်ရောမ 8:16: "ဝိညာဉ်တော်ငါတို့သည်ဘုရားသခင်၏သားဖြစ်ကြသည်တော်သည်ငါတို့၏ဝိညာဉ်နှင့်အတူသက်သေခံတော်မူ၏။ " ကျနော်တို့က "တစ်ဦးပွဲတော်လူအစုအဝေး, ကောင်းကင်၌ရေးထားလျက်ရှိ၏၎င်းတို့၏အမည်များကိုသူ၏သားဦး၏အသင်းတော်တစ်ခု" (ဟေဗြဲ 12:23) ဖြစ်ကြသည်။ "ဒါပေမယ့်သင်ကရှေးခယျြသောလူမျိုး, တစ်ဦးတော်ဝင်ယဇ်ပုရောဟိတ်တစ်ဦးသန့်ရှင်းသောလူမျိုး, မိမိအံ့သြဖွယ်အလင်းထဲသို့မှောင်မိုက်ထဲကသင်တို့ကိုခေါ်တော်မူသောသူကိုသူ၏ဘုန်းကြီးသောအကျင့်ကိုကြားပြောစေခြင်းတစ်ဦးပိုင်ထိုက်သောလူဖြစ်ကြ၏။ " (1 ပေ2း 9) "ဝိညာဉ်တော်ငါတို့သည်ဘုရားသခင်၏သားဖြစ်ကြသည်တော်သည်ငါတို့၏ဝိညာဉ်နှင့်အတူသက်သေခံတော်မူ၏။ " ကျနော်တို့က "တစ်ဦးပွဲတော်လူအစုအဝေး, ကောင်းကင်၌ရေးထားလျက်ရှိ၏၎င်းတို့၏အမည်များကိုသူ၏သားဦး၏အသင်းတော်တစ်ခု" (ဟေဗြဲ 12:23) ဖြစ်ကြသည်။ "ဒါပေမယ့်သင်ကရှေးခယျြသောလူမျိုး, တစ်ဦးတော်ဝင်ယဇ်ပုရောဟိတ်တစ်ဦးသန့်ရှင်းသောလူမျိုး, မိမိအံ့သြဖွယ်အလင်းထဲသို့မှောင်မိုက်ထဲကသင်တို့ကိုခေါ်တော်မူသောသူကိုသူ၏ဘုန်းကြီးသောအကျင့်ကိုကြားပြောစေခြင်းတစ်ဦးပိုင်ထိုက်သောလူဖြစ်ကြ၏။ " (1 ပေ2း 9) "ဝိညာဉ်တော်ငါတို့သည်ဘုရားသခင်၏သားဖြစ်ကြသည်တော်သည်ငါတို့၏ဝိညာဉ်နှင့်အတူသက်သေခံတော်မူ၏။ " ကျနော်တို့က "တစ်ဦးပွဲတော်လူအစုအဝေး, ကောင်းကင်၌ရေးထားလျက်ရှိ၏၎င်းတို့၏အမည်များကိုသူ၏သားဦး၏အသင်းတော်တစ်ခု" (ဟေဗြဲ 12:23) ဖြစ်ကြသည်။ "ဒါပေမယ့်သင်ကရှေးခယျြသောလူမျိုး, တစ်ဦးတော်ဝင်ယဇ်ပုရောဟိတ်တစ်ဦးသန့်ရှင်းသောလူမျိုး, မိမိအံ့သြဖွယ်အလင်းထဲသို့မှောင်မိုက်ထဲကသင်တို့ကိုခေါ်တော်မူသောသူကိုသူ၏ဘုန်းကြီးသောအကျင့်ကိုကြားပြောစေခြင်းတစ်ဦးပိုင်ထိုက်သောလူဖြစ်ကြ၏။ " (1 ပေ2း 9)
Vecka 25, tisdag 18 juni 2019 kl. 10:50